Monday March 30, 2020 - 20:07:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
23-kii Rajab 1441H, waxaa soo gabagaboobay shir socday muddo 5 maalmood ah oo ay qabatay Xarakada Al-Shabaab, kaas oo lagu marti qaaday dad kor u dhaafaya 100-xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameed, culimo iyo qaar kamid ah madaxda Al-Shabaab sida a
23-kii Rajab 1441H, waxaa soo gabagaboobay shir socday muddo 5 maalmood ah oo ay qabatay Xarakada Al-Shabaab, kaas oo lagu marti qaaday dad kor u dhaafaya 100-xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameed, culimo iyo qaar kamid ah madaxda Al-Shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera, laguna baahiyey baraha bulshada.
Qormadan kooban ugama hadli doono shirkaas, go'aanada kasoo baxay iyo ujeedka laga lahaa, balse waxaan ku hogotusaaleyn doonaa 6-qodob oo aan isleeyahay wuu la gaar ahaa shirkii Al-Shabaab.
1. Wuxuu Qabsoomay Xilli Laga Walaacsan yahay CoronaVirus.
Kulanku wuxuu dhacay iyadoo la hakiyey dhamaan kulamadii iyo shirarkii dunida sababo ku aadan cabsida laga qabo viruska dilaaga ah ee Korona, islamarkaana Albaabada la isugu dhuftay Jamaacadihii, Iskuuladii iyo goobihii isku imaatinada ahaa oo dhan.
Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin inuu cudurka Coronavirus yahay xaqiiq jirta oo halis ku ah dunida sida ay ku sheegeen war murtiyeedkii kasoo baxay shirka, waxayna u arkaan inuu yahay imtixaan ay tahay inay Muslimiintu ku sabraan iyo ciqaab uu Allaah dul dhigay gaalada, dadka aqoonta u leh Al-Shabaab ayaa saadaalinaya inuu Coronavirus u hiilinayo kooxda, sababtoo ah waxaa baaqday kulamadii caalamiga ahaa ee ka dhanka ahaa waxa loogu yeero argigixisada, Mareykanku wuxuu sheegtay inuu hakiyey dhaq-dhaqaaqyadii militari ee uu ka waday afrika iyo caalamka intiisa kale.
Koroona wuxuu wiiqay dhaqaalihii Maraykanka iyo dhamaan dowladaha dagaalka ku haya Al-Shabaab. Cudurka oo noqday caqabadda koowaad ee haysata Maryakanka ayaa sidoo kale kala dhantaalay awoodii reer galbeedku ku wajahayeen ururada islaamiga ah ee kasoo horjeeda siyaasadaha reer galbeedka.
2. Beesha Caalamka oo aan Lagu Martiqaadin Shirka.
Sanadihii lasoo dhaafay waxaa caada noqotay marwaliba oo la qabanqaabinayo shir ama kulan looga hadlayo arimaha Soomaaliya, inay beesha caalamku hormuud ka ahayd abaabulka iyo maamulka shirkaas.
Balse waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirka Al-Shabaab waxaa kamid ah in aysan kasoo qeybgalin ergo ama diblumaasiyiin matalayey beesha caalamka.
Ergeyga gaarka ah ee UN-ka James Swan, wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Farsisko Madeera, Safiirada Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub, Kenya iyo Itoobiya ayaan muuqaaladooda lagu arag sawirada laga soo qaaday shirka, sidoo kale waxaan lagu martiqaadin Axmad Madoobe iyo Dani oo mucaarad ku ah xukuumada Farmaajo. Xarakada Al-Shabaab ayaa ah caqabada ugu weyn ee hortaagan maamulka Villa Soomaaliya.
Arinta kale ee xusida mudan ayaa ah in gundhigga iyo aasaaska go'aanada kasoo baxay shirka ay ahaayeen kitaabka iyo sunaha, taas oo ah mid ka duwan shirarka ay qabsadaan madaxda dowlada Federalka kuwaas oo go'aamadooda lagu saleeyo xeerarka qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ah.
3. Waxaa Ka Qeybgalay Madax uu Mareykanku Dul Dhigay Malaayiin Dollar.
Qaar kamid ah xubnaha Alshabaab ee uu Mareykanka baadigoobayo ayaa kasoo qeybgalay Kulanka wadatashiga ee ay qabatay kooxdu.
Fu'aad Maxamad Khalaf oo uu Mareykanku ku baadigoobayo abaalmarin dhan 5 milyan oo dollar oo la siinayo qofkii xogtiisa keena ayaa ka dhex muuqday sawirada la baahiyey.
Warbaahinta taageersan Al-Shabaab waxay sheegeen inuu shirkaas goobjoog ka ahaa Amiirka guud ee Xarakada Al-Shabaab Axmad Cumar Abuu Cubeyda oo ah ninka loogu raadinta badanyahy Afrika, dowlada Mareykankuna ay dulsaartay lacag gaareysa 6 milyan oo dollar.
Bilihii u dambeeyey diyaaradaha mareykanka ayaa duqeymo lixaad leh ku hayey deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab, warbaahinta ayaa dhankeeda waxey hadal heysay in ururku uu wajahayo cadaadisyo militari oo sababay inuu u firxado dhanka hawdka. Balse shirka ayaa muujiyay in kooxdu weli awood u leedahay iney abaabusho shirar u dhigma heer caalami, kulmiso xubno ka badan 100, ku dhawaad mudo todobaad ahna ay si nabadgelyo ah uga tashadaan waxa ay ugu yeereen "aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika". Taas oo ka dhigeysa al-Shabaab koox aan la saadaalin karin qorshaha u degsan iyo go'aanada ay qaadanayaan.
4. Ka Qeybgalayaasha oo aysan Dumar Ku Jirin:
Siyaasadda Soomaalida waxaa xilliyadii ugu dambeeyay kusoo biiray erayo ku cusub dhaqanka iyo dhegaha dadka Soomaaliyeed, sida qoondada dumarka iyo kaalinta ururada bulshada rayidka ah, kuwaas oo laga soo minguuriyay hanaanka siyaasadeed ee wadamada reer galbeedka.
Waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirweynaha Al-Shabaab waxaa kamid ahaa in aysan kasoo qeybgalin dumar iyo ururada bulshada rayidka ah, taas oo xoojinaysa aragtida aan kor kusoo xusnay ee ah in gundhiga shirka lagu saleeyay mabaad'ida islaamka. Xeerarka caalamiga ah ayaa xadiday saamiga dumarku ay ku leeyihiin ka talinta aayaha bulshada ay ka tirsan yihiin. Balse Alshabaab ayaan gebi ahaanba ictiraafsaneyn xeerarka caalamiga ah.
5. Calanka Madoow ee Tawxiidka:
Waxyaalaha sida gaarka ah indhahayga usoo jiitay markii aan daawanayay sawirada faraha badan ee laga soo qaaday shirka waxaa kamid ahaa muuqaalka calanka madoow ee astaanta u ah Al-Shabaab.
Si qurux badan ayaa calankaas waxaa loogu xardhay hoolka uu shirku ka dhacay, waxaana uu dhinaca midig ka yaallay minbarka ay soo istaagayeen xubnaha hadallada ka jeedinayay kulanka. Calankaas madoow ee Tawxiidka dhexda looga xardhay ayaysan sinaba suurtagal ku ahayn inuu kasoo muuqdo shirarka ay qaban qaabiso beesha caalamiga, arintaas oo ka dhigeysa astaan uu la gaar noqday shirka ay Al-Shabaab soo qabanqaabisay, isagoo uusan garab oollin calan kale.
6. Hoteelka Lagu Qabtay oo aan La Shaacin.
Shirkan wuxuu la gaar ahaa in aanan qorshihiisa iyo qabsoomidiisa hore loola wadaagin warbaahinta caalamka, sidaas darteed ma jirto cid ilaa hada garan karta magaalada lagu qabtay oo aan ka ahayn xubnihii lagu martiqaaday.
Hoolku wuxuu ahaa mid aad u qurux badan loona diyaariyey si heersare ah, wuxuu u dhigmay ama ka qurux badnaa Hoolalka shirarka ee hotelada ku yaalla Muqdisho iyo Nayroobi, balse waxa kaliya ee uu uga duwan yahay waxay tahay inaan warbaahinta lala wadaagin magaca Hotelka iyo goobta uu ku yaallo.
Ugu dambeyn, waxaan oran lahaa Xarakada Al-Shabaab waxay buuxisay firaaqii dowladnimo ee kajiray wadanka, waxay nabad kusoo dabaashay deegaanada ay ka taliso, waxay dhistay maamullo bixinaya adeegyada aasaasiga ee bulshadu u baahan tahay, garsoor hufan oo dadka cadaalad ku maamula sida ay qirsan yihiin dowladaha iyo hay'adaha dagaalka kula jira oo ay ugu horeeyaan UN-ka iyo xitaa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa (AFRICOM). Maamulada Al-Shabaab waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyaa bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka arimiyaan, arintaas oo ah mid banaanka soo dhigtay awoodooda maamul iyo inay leeyihiin karti ay ku hogaamiyaan siyaasada wadanka.
Suuradda dhabta ah ee Al-Shabaab waxay meesha ka saareysaa aragtidii uu ka aaminsanaa aduunweynaha ee ahayd inay kooxdu tahay mid argigixiso ah oo u taagan kaliya dil iyo burbur, waxayna dhanka lama huraan ka dhigeysaa in lala mucaamilo ururka.
Waxgaradka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dib u qiimeyn ku sameeyaan aragtida ay qabaan ururka Al-Shabaab, kuna fiiriiyaan aragti aysan saameyn kulahayn beesha caalamka iyo dowladaha reergalbeedka, iyadoo meel iska dhigaya kala aragti duwanaanshaha maamul ee kala dhexeysa kooxda, Al-Shabaab waxay mudan yihiin in lagu ixtiraamo aragtidooda siyaasadeed iyo adeeggga ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed.
Qore: C/Risaaq Xaaji Xuseen.
FG: Fikirka wuxuu gaar uyahay qoraaga Maqaalka SomaliMeMo looma tiirin karo
kala xiriir SomaliMeMo Email:[email protected]
Qarax uu ku gubtay gaari ciidan oo ka dhacay deegaan katirsan Sh/dhexe.
Qoys muslimiin ah oo lagu dilay weerar gaari jiirsiin ah.
C/raxmaan Cali Axmed oo udhintay dhaawac kasoo gaaray duqeymihii diyaaradaha Kenya ee Ceel Cadde.
Ciidamada wilaayada Islaamiga Sh/hoose oo gaaray deegaanka Warmaxan.
Mareykanka oo faarujinaya saldhiggii ugu weynaa ee uu ku lahaa Afghanistan.
Codad: Beesha Qubeys iyo Al Shabaab oo heshiis buuxa gaaray
Sawirro: Falasdiiniyiinta oo udabaal degay guushii ay ka gaareen Yahuudda.
Dowladaha G7 oo ku goodiyay in ay dhaqaalaha ka jaran doonaan DFS haddii aan xal laga gaarin khilaafaadka Doorashada.